Ụbọchị My Pet » 3 Atụmatụ maka ihe ịtụnanya Mmekọrịta
emelitere ikpeazụ: Nov. 29 2020 | 2 min agụ
Mmekọrịta ndị kasị ịrịba ihe anyị nwere ike. Ma dị ka ihe niile ihe ndị dị mkpa ná ndụ ha na-achọ a ọtụtụ ọrụ. Anyị ga-eme n'aka ọrụ ịnọgide na-enwe anyị magburu onwe n'otu. Ma ezi ihe bụ na ihe ole na ole dị mfe mgbanwe anyị nwere ike hụ a mma na ọtụtụ ihe a obi ụtọ n'otu dị n'etiti anyị na onye anyị na-n'anya. Ebe a bụ nnọọ a atọ Atụmatụ aka ịnọgide na-enwe oké mmekọrịta:
Nkwurịta okwu bụ isi ọ bụla mmekọrịta. Ekwu okwu ma na-emeghe na onye gị na. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịbụ na-emeghe onye gị na mgbe ndị niile i nwere ike na-emeghe na? Ka ha mara otú ị na-eche, Otú ọ dị ịdị otú ị na-eche nwere ike ịbụ, na-ekwe ka ha na-aga n'ebe ahụ. The njọ ihe i nwere ike ime bụ na-ihe azụ na-ahụ afọ ala ahụ akara kpamkpam ewe ezigbo ihe i kwesịrị kwuru afọ gara aga. Ọ bụrụ na mmadụ hụrụ unu n'anya n'ezie na ha ga-arụ ọrụ site n'aka ihe niile na ị, ọbụna ma ọ bụrụ na ọ na-ewe ha oge. -Eme ihe n'eziokwu na-emecha ị ga na-eto eto nso kama n'ihu iche.
Nọgidenụ na-mmekọahụ Akụkụ nke Ihe aga Strong
Mgbe a mgbe mmekọahụ n'akụkụ a mmekọrịta pụrụ ịmalite na-dwindle si mbụ ụbọchị mgbe ị nwere ike ghara inwe ezu nke onye ọ bụla ọzọ. Gosi gị hụrụ na ị na-ka bụ nnọọ ihe a mmekọahụ eke site ịzụ sexy uwe ime ma ọ bụ ọbụna dị site na-eme gị anam-elu a ụfọdụ ụzọ. Red egbugbere ọnụ. Anwụrụ anya. Mee ka ha ka na-achọ gị n'ihi na ha ka na-eme n'okpuru ya niile.
M na-agụ ọtụtụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị isiokwu ebe ndị mmadụ na-ekwu dị mkpa ka ị na-emeso ha pụtara na-ha nkọ. O yiri ya mere ihe ọjọọ ka m. Ka emechara, ihe bụ ihe ndị kasị-ekwu na ha na-achọ? N'akụkụ a nke ịkpa ọchị, onye na-ụdị yiri ka ndị kasị ewu ewu azịza. Ma mgbe ụfọdụ m na-eche na ọ bụ ihe na-ezighị ezi na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọdọ mmiri. E nwere ọtụtụ ndị na-etinye na nke a nkpuchi kwụsị onwe ha na-achọ ka a egwu egwu. Kemgbe ụdị yiri ka nwetara a ọjọọ ada aba dị ka a na-adịghị ike ebe n'ezie na ọ bụ gị ike ngwá ọrụ mgbe ọ na-abịa mmekọrịta. The ịhụnanya nke na-abịa site n'aka onye bụ onye nwayọọ, obiọma na onye ị maara bụ maka ọdịmma gị nwere ike ghara emeri. Ya mere na-enwe obiọma gị na onye òtù ọlụlụ ha ga-omume na obiọma. Ọ bụrụ na ha na-eme ọ bụghị mgbe ahụ ha na-adịghị uru oge gị. Unu hapụ kemgbe a ezigbo mmadụ ịbụ n'ihi na onye ọ bụla na ịhụnanya ga-abịa na ụzọ gị na ọ ga-aka mma karịa gị chere na ọ dị mgbe ike na-.